Somaliland oo ciidamo u dirtay Galbeedka Gobalka Sool & Walaac laga muujiyey dagaal cusub in ay dhacaan.
LAASCAANOOD(P-TIMES) – Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya safar ay ku tageen deegaanada galbeedka gobalka Sool, wafdi ka socda maamulka gobalkaas ugu magacaaban Somaliland, halkaas oo ahayd goobihii ay horey ugu dagaalameen labo maleeshiyo beeleed oo walaalo ah kana soo jeeda deegaanadaas.
Wararka ayaa sheegaya in ay Somaliland halkaas geysay ciidamo cusub, kuwaas oo mar horeba dadka deegaanku ay ka muujiyeen walaac cusub, oo ay cabsi ka qabaan in ay dib u soo celiyaan dagaaladii guusha laga gaaray ee halkaas horey uga dhacay.
Beelo walaalo ah ayaa ku dagaalamay deegaanadaas dhammaadkii sannadkii hore, waxaana dagaaladaas ay geysteen dhimasho iyo dhaawac fara badan, oo ugu dambeyntii xal kama dambeys ah laga gaaray, markii ay dhinacyadu kushireen magaalada Jigjiga.
Dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa dhawaan u soo dirtay deegaankaas wafdi kormeer ku sameeya xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay iyo sida heshiiskii u hirgalay, waxaana ay la kulmeen dhinacyada oo ay wadajir isku arkeen.
Talaabada Somaliland waqtigan ciidamada ugu dirtay ayay dadka deegaanka qaarkood u arkaan dib boorka uga jafida xiisadii horey udhacday, waxaana qaarkood ay sheegeen in looga baahan yahay Somaliland in aysan dib u soo kicin dagaaladii Ahliga ee labada beelood.
Gudoomiyaha gobalka Sool, ee Somaliland ayaa shalay ka sheegay deegaanada Dharkeyn-Geenyo in ay ka shaqeynayaan sidii nabadda iyo daganaanshaha labada dhinac loo xoojin lahaa, isagoo bogaadiyey talaabooyinka ay waxgaradka labada dhinacba sameeyeen.